Tổng hợp bài tập Excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới | Anybook.vn - Anybook
Tổng hợp bài tập Excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới | Anybook.vn
Ny fanazaran-tena Excel dia manambatra endrika statistika sy kajy rehefa mampiasa fiasa fototra amin’ny Excel ianao na mandroso rehefa misy karazana fanazaran-tena excel maro izay mitaky ny mpampiasa hanambatra asa maro. Andao hianatra momba izany miaraka amin’ny 123job.
Ho an’ireo izay tsy maintsy manao asa matetika amin’ny rindrambaiko Excel, kaonty, ireo izay manana fahatakarana tsara ny asa, kajy ary koa ny fampiasana amin’ny fepetra takiana, na ny teoria fototra toy ny fandrafetana angona, dia tena ilaina ny fandrafetana Spreadsheet. Rehefa mahafehy ny teoria ianao dia ho afaka hampihatra izany excel fanazaran-tena mba hahatakarana bebe kokoa ny fomba fampiasana. IRETO Fanazaran-tena Excel Ireto ny fanazaran-tena misy vahaolana sy ny sasany Fanazaran-tena amin’ny Excel Advanced Tsy misy vahaolana ho anao hampiharana ny fahalalanao hiatrehana ny fanazaran-tena. Hisy ny fanazaran-tena zaraina amin’ny asa samihafa ary misy excel fanazaran-tenaamin’ny endrika mitambatra miaraka amin’ny fepetra takian’ny atiny ambony kokoa.
1 I. Misintona fanazaran-tena Excel misy valiny
1.1 1. Fanazaran-tena kajy
1.2 2. Fanazaran-tena Excel
1.2.1 2.1 Fampiasa matematika amin’ny Excel
1.2.2 2.2 Ny fiasa SUM dia manambatra takelaka maromaro
1.2.3 2.3 IF miasa amin’ny Excel
2 II. Fanazaran-tena fototra Excel
3 III. Fanazaran-tena Excel fototra araka ny lohahevitra
4 IV. Fampandehanana Excel fototra ho an’ny kaonty sy birao
4.1 1. Sokafy indray mandeha ny bokikely Excel maro
4.2 2. Asehoy/ afeno ny hitsin-dàlana fitendry
4.3 3. Fidio ny angona rehetra
4.4 4. Hanova andalana ho tsanganana na ny mifamadika amin’izany
4.5 5. Mifamadiho eo amin’ny takelaka Excel samihafa
4.6 7. Ahoana ny fametrahana tsipika diagonaly ao amin’ny sela
I. Misintona fanazaran-tena Excel misy valiny
Fanazaran-tena fototra excel
1. Fanazaran-tena kajy
Formula kajy inFanazaran-tena Excel miaraka amin’ny vahaolanaMisy ihany koa ny maro, toy ny fanampiny ao amin’ny Excel na mandroso kokoa izay afaka manao kajy ny sandan’ny exponentiation…
2. Fanazaran-tena Excel
Ny asa Excel dia mizara ho karazana asa maro isan-karazany, toy ny asa statistika, ny matematika sy ny trigonometrika, ny daty sy ny ora toy ny DATE function, ny database function, ny DCOUNT function… Ny fiasa ao amin’ny excel exercice dia azo ampifandraisina amin’ny tsirairay. mamaha ny tabilao data toy ny asa FIND miaraka amin’ny fiasa LEFT sy ny fiasa MID mba hanasarahana ny andiana data….
2.1 Fampiasa matematika amin’ny Excel
Miaraka amin’ny ohatra toy ny etsy ambany, dia efa manana raikipohy miasa isika ary mila miditra amin’ny toerana mety amin’ny sela fotsiny ianao amin’ny sandan’ny kajy ao. Fanazaran-tena Excel miaraka amin’ny vahaolana vita.
2.2 Ny fiasa SUM dia manambatra takelaka maromaro
Ny fiasan’ny SUM dia raisina ho toy ny asa fototra ao Fanazaran-tena Excel miaraka amin’ny vahaolana ary ny fampiharana ny asa SUM dia tena tsotra ihany koa. Ohatra amin’ny Fanazaran-tena Excel miaraka amin’ny vahaolana Amin’ity tranga ity, mila ampidirinao fotsiny ny sanda ao amin’ny sela tsirairay amin’ny alàlan’ny takelaka mba hahazoana ny totalin’ny sandany.
2.3 IF miasa amin’ny Excel
Ny asa IF dia fiasa misy fepetra ao amin’ny Excel, mitady ny sanda mifanaraka amin’ny fepetra nomena.
Misy maro koa excel fanazaran-tena hafa ho an’ny fanondroanao momba ny fomba famahana ary koa ny fampiharana amin’ny tabilao data tokony hovahanao
Misintona fanazaran-tena excel misy vahaolana ETO
II. Fanazaran-tena fototra Excel
Ireto ny famintinana ny Fanazaran-tena Excel Raha te-hahafantatra ny fototry ny asa ao amin’ny Excel ianao dia jereo ny momba azy ireo mba hahafantarana ny fomba fampiasana ny fiasa ao amin’ny Excel sy ny fomba fampifangaroana ny fiasa ao amin’ny Excel.
Fanazaran-tena santionan’ny asa ABS
COUNT . fanazaran-tena santionany
Fampiharana santionan’ny asa AVERAGE
Santionany fanazaran-tena FAHATIANA
MIN .fampiasana santionan’ny asa
Santionany fanazaran-tena LOGNORMDIST asa.
Fanazaran-tena santionany NORMSDIST.
Fanatanjahantena santionany amin’ny fampiasana ny fiasa HLOOKUP miaraka amin’ny fiasa IF.
Fanatanjahan-tena santionany mampiasa fiasa HLOOKUP miaraka amin’ny fiasa LEFT.
Fanatanjahan-tena santionany amin’ny fampiasana ny fiasa VLOOKUP miaraka amin’ny fiasa HLOOKUP.
Santionany fanazaran-tena mampiasa ny VLOOKUP miasa miaraka amin’ny IFERROR . asa
Fanatanjahantena santionany amin’ny fampiasana ny fiasa VLOOKUP miaraka amin’ny fiasa RIGHT.
Fanatanjahan-tena santionany amin’ny fampiasana ny fiasa VLOOKUP miaraka amin’ny fiasa MATCH.
Ny fanazaran-tena santionany dia mampiasa ny fiasa VLOOKUP hanisa ny isa.
Fanatanjahantena santionany amin’ny fampiasana ny fiasa VLOOKUP hanisa karama.
READ Chất có nhiệt độ sôi cao nhất? Kiến thức cơ bản về nhiệt độ sôi | Anybook.vn
Misintona 40+ fanazaran-tena Excel fototra amin’ny Excel eto.
Afaka misintona rakitra ianao ary manokatra azy ireo Fanazaran-tena Excel araka ny asa tsirairay izay ilainao hianarana. Antenaina fa ho azonao ny fampiasana ny fiasa tsirairay mba hahafahanao mampihatra izany amin’ny fiasa hafa Fanazaran-tena Excel Advanced. Mirary anao ho tsara vintana!
III. Fanazaran-tena Excel fototra araka ny lohahevitra
Fanazaran-tena 1: Kajy ny karama
Fanazaran-tena Excel Advanced 1
Ampidiro ny formulas hanaovana ireto kajy manaraka ireto:
Fiantohana ara-tsosialy = 0,05 * LC
Raha NC > 25, Bonus = LC * 2
Raha 23 Raha NC
Loyalty = LC + Bonus – Fiantohana ara-tsosialy
Kajy ny isa, salan’isa, max, min andalana ho an’ny tsanganana isa.
Asio araka ny tsanganana NC midina
Mitadiava olona manana HS >= 3 sy NC > 24
Manaova sarin’ny tsanganana 3D amin’ny tsanganana NC, HS
Jereo ny toromarika
Fanazaran-tena 2: Kajy ny voka-bary
Fanazaran-tena Excel Advanced 2
Asio tsanganana araka ireto formula manaraka ireto:
Type = ‘A’ raha salan’isa> 1500
Type = ‘B’ raha 1300 Type = ‘C’ raha antonony
Vidin’ny tsanganana: Ampiasao ny asan’ny Vlookup hijerena ny vidiny etsy ambany mba hamenoana ny angona ao amin’ny tsanganana Price
Kajy Max, Min ho an’ny tsanganana (afa-tsy ny karazana tsanganana).
Alaharo araka ny tsanganana Ns 99 midina
Mitadiava karazana vary manana Ns 99 > 1400 ary salan’isa > 1300
Manaova kisary amin’ny endrika tsipika fampitahana ny voka-bary N1, N2, N3 tao anatin’ny 3 taona.
Fanazaran-tena 3: antontan’isa momba ny fidiram-bola
Fanazaran-tena Excel Advanced 3
Kajy ny karazana tsanganana araka ity formula manaraka ity:
Type = “A” raha salan’isa> 1600
Grade = “B” raha 1400 Grade = “C” raha antonony
Kajy ny tsanganana fampiasam-bola: Ampiasao ny fiasa Vlookup hijerena ny haavon’ny fampiasam-bola etsy ambany ary fenoy ny angona ao amin’ny tsanganana fampiasam-bola.
Alaharo araka ny fidiram-bola 95 tsanganana midina.
Tadiavo ny vondrona misy fidiram-bola 97> 1600 ary fidiram-bola antonony> 1300.
Sariho ny tsanganana 3-D amin’ny tsanganana 97 karama.
Fanazaran-tena 4: Kajy isa
Fanazaran-tena Excel Advanced 4
Transcripts fanadinana Semester 1 1999
Total = naoty matematika * 5 + naoty vaovao * 5 + naoty fizika * 4
Salan’isa = (Naoty Matematika * 5 + Naoty Vaovao * 5 + Naotin’ny Fizika * 4) / 14
Kilasy = “A” raha antonony >= 9
Grade = “B” raha 7 Grade = “C” raha antonony
Kajy ny tsanganana Fanabeazana: Ampiasao miaraka amin’ny fiasa Vlookup hijerena ny haavon’ny vatsim-pianarana etsy ambany mba hamenoana ny angona ao amin’ny tsanganana Scholarship.
Alaharo amin’ny tsanganana Math Score midina.
Mitadiava mpianatra manana Total > 108 sy Score >= 7
Saripika amin’ny endrika Tsanganana 3D amin’ny Math Score, tsanganana News Score.
READ Những câu chuyện cổ tích hay nhất về mẹ | Anybook.vn
Fanazaran-tena 5: antontan’isa momba ny varotra
Fanazaran-tena Excel Advanced 5
STATISTIKA NY ENTANA
Ampidiro ireto formula ireto mba hanaovana ireto kajy manaraka ireto:
Serivisy = 5% Renivohitra.
Hetra = 10% amin’ny vola miditra.
Ny fidiram-bola tena izy = vola miditra – Renivohitra – Hetra – Serivisy
Raha tena fidiram-bola > 0 dia soraty hoe “Tombontsoa”, miaraka amin’ny 0 soratana hoe “Break Even”, raha tsy izany dia soraty hoe “Fatiantoka”.
Kajy ny renivohitra manontolo sy ny vola miditra amin’ny vary.
Alaharo araka ny tsanganana renivohitra Midina.
Mitadiava fivarotana misy Revenue > 60 sy Capital > 70.
Manamboara grafika amin’ny endrika XY maneho ny fifamatorana misy eo amin’ny asa y dia ny fidiram-bola ary ny x dia ny renivohitra.
Fanazaran-tena 6: antontan’isa momba ny fampindramam-bola
Fanazaran-tena Excel Advanced 6
Taona fandoavana = Taona fampindramam-bola + fe-potoana fampindramam-bola
Vola tokony haloa = Principal + Principal * Interest * Fe-potoana findramam-bola.
Kajio ny laharam-pahamehana amin’ireo singa araka ity formula manaraka ity:
Raha ny fe-potoana fampindramam-bola>= 7, ny laharam-pahamehana dia “Tier 1”.
Raha 4 Raha fe-potoana fampindramam-bola
Vola sy salan’ny tsanganana: Principal, Vola azo aloa
Sokafy araka ny tsanganana voalohany amin’ny filaharana midina ny angona.
Mitadiava orinasa manana principal> 40 ary fe-potoana fampindramam-bola>= 4.
Manaova tabilao andalana ho an’ny tsanganana 2 amin’ny fe-potoanan’ny Principal sy ny fampindramam-bola.
Fanazaran-tena 7: Kajy ny naotin’ny oniversite
Fanazaran-tena Excel Advanced 7
Kajy ny fitambaran’ny isan’ny singa = Isan’ny trano M1, M2, M3 mitambatra
Ampiasao ny VLOOKUP hitadiavana ny singa tsirairay amin’ny taranja tsirairay ary hikajiana ny salan’isa salan’isa mifanaraka amin’ireto formula manaraka ireto: Salan’isa salan’isa = (M1*Isan’ny lehibe amin’ny M1 + M2*N amin’ny lehibe amin’ny M2 + …)/Isan’ny totalin’ny vondrona akademika M2 + …)
Fenoy ny tsanganana momba ny naoty:
Tsara: isa antonony >= 8
Kajy ny fitambaran’ny tsanganana, sy ny salan’isa, ny isan’ny (tsy nahomby) fepetra takiana amin’ny M1, M2, M3, ary naoty antonony (Pass: Score antonony >=5, tsy mahafa-po: naoty antonony
Laharana: ny laharan’ny mpianatra ao amin’ny lisitra mifototra amin’ny salan’isa (ny mpianatra manana salan’isa ambony indrindra dia laharana voalohany)
Manaova tabilao XY Scatter hanehoana ny fifandraisan’ny teboka M1 sy M2
Andeha hosivanintsika ireo mpianatra manana naoty M1 eo anelanelan’ny 6 sy 8
Sokafy ny solaitrabe amin’ny filaharana midina araka ny tsanganana Total sy ny tsanganana laharana
Fanazaran-tena 8: Lisitry ny vidin’ny hofan-trano
Fanazaran-tena Excel Advanced 8
Lisitry ny vidin’ny fanofana trano fandraisam-bahiny
Isan’ny andro fijanonana = Daty niaingana – Daty nahatongavana
Ny sandan’ny efitrano dia hokajiana amin’ny alalan’ny fikarohana amin’ny karazana efitrano mifanandrify amin’ny vahiny mijanona miaraka amin’ny Vidin’ny iray isan’andro ho an’ny efitrano tsirairay isaky ny karazana ampitomboina amin’ny isan’ny andro fijanonana.
Ny saram-pandraharahana dia hokajiana ao amin’ny tabilaon’ny Saran’ny efitra ampitomboina amin’ny sarany
Ny fandoavam-bola dia hitovy amin’ny totalin’ny sarany amin’ny efitrano + saran’ny serivisy
Alaharo araka ny fandoavam-bola amin’ny filaharana midina
Sivanina ny efitrano misy Deposit>= 5000000
Manamboara kisary 3-D momba ny fandoavam-bola araka ny karazana efitrano.
READ Quái vật trong đêm (Yoru Sumino) – Giữa đêm đen, là quái vật hay là con người | Anybook.vn
Fanazaran-tena 9: Tatitra momba ny valin’ny fidiran’ny oniversite
Fanazaran-tena Excel Advanced 9
TATERAKA NY VALINY ONIVERSITA
Amin’ny fampiasana ny asa IF kajy ny UT1 (naoty laharam-pahamehana araka ny foko), ny Kinh dia manana UT1 = 0, Tay sy Thai manana UT1 = 1, foko hafa manana UT1 = 1.5
Ampiasao ny fonction VLOOKUP hanisa ny UT2 (naoty laharam-pahamehana araka ny faritra): Ny faritra 1 dia manana UT2 = 0, ny faritra 2 dia manana UT2 = 1, ny faritra 3 dia manana UT2 = 1.5
Raha mahazo ny naoty Excellent ny kandidà dia 1 ny totalin’ny isa.
Ny valiny dia Pass ary raha Total Score >=20 dia tsy nahomby ny ambiny
Sokafy ny takelaka midina amin’ny Totals, Faritra
Tadiavo ireo mpifaninana tsy Kinh ary ny vokatra dia Do
Manaova sarin’ny tsipika amin’ny fomba laharana faha-4 mba hampitahana ny naotin’ny fitsapana sy ny isa manontolo
IV. Fampandehanana Excel fototra ho an’ny kaonty sy birao
1. Sokafy indray mandeha ny bokikely Excel maro
Raha tokony hanokatra fotsiny ny boky fiasana Excel tsirairay ianao rehefa misy rakitra maro hokarakaraina, dia azonao atao ny manokatra takelaka Excel maromaro indray mandeha. Mba hanaovana izany, safidio ny rakitra tianao hosokafana ary tsindrio ny bokotra Enter, hisokatra miaraka ny takelaka rehetra.
2. Asehoy/ afeno ny hitsin-dàlana fitendry
Ireo dia fiasa tsy dia fantatra loatra amin’ny Excel 2007 sy aoriana. Rehefa misafidy ny manindry ny lakile Alt ianao, dia hiseho eo amin’ny bara fitaovan-tserasera ireo hitsin-dàlana ary mifanaraka amin’ireo fitaovana ireo. Raha hampiasa izany ianao dia mila manindry ny Alt + keyboard shortcut mifanaraka amin’izany. Midika izany fa tsy mila mitadidy ny fanendry bokotra ianao ary mbola afaka mampiasa azy ireo mora foana hanafainganana ny asanao.
3. Fidio ny angona rehetra
Mety hahay fomba maro hifidianana ny angona rehetra ianao amin’ny alalan’ny fanindriana ny hitsin-dàlana Ctrl + A, saingy vitsy ny olona mahafantatra fa, tsindrio fotsiny eo amin’ny zoro ambony havia amin’ny takelaka dia hifidy ny angona rehetra.
4. Hanova andalana ho tsanganana na ny mifamadika amin’izany
Mety ho vitanao ny namorona latabatra ary te hanova andalana ho tsanganana na tsanganana ho andalana. Toy izao ny fomba hanaovana azy:
Safidio ny laharana (na tsanganana) tokony hafindranao, dia tsindrio ny Copy eo amin’ny menio (Ctrl+C)
Safidio ny sela tianao hametahana ny latabatra vaovao ary mifidiana Mametaka manokana amin’ny menio (na Alt + E -> avy eo tsindrio ny fanalahidy S)
Ao amin’ny boaty fifanakalozan-kevitra Mametaka manokana, mifidiana Transpose ary tsindrio OK.
5. Mifamadiho eo amin’ny takelaka Excel samihafa
Rehefa manana takelaka maromaro misokatra indray mandeha ianao, dia mety mahasorena ny mifamadika eo anelanelan’ny takelaka samihafa. Ampiasao ny hitsin-dàlana Ctrl + Tab mba hifindra mora foana eo amin’ny takelaka. Ity fiasa ity dia hampiasaina ihany koa hifindra eo amin’ny tabilao Windows samihafa ao amin’ny Firefox amin’ny rafitra fiasa Windows 7.
Amin’ny ankapobeny dia misy Menus Shortcut 3: Save, Undo Type and Repeat Type. Na izany aza, raha te hampiasa hitsin-dàlana bebe kokoa ianao, toy ny hoe te hanao Copy na Cut, dia azonao atao ny mametraka azy toy izao:
File-> Options-> Quick Access Toolbar, ampio Cut sy Copy avy amin’ny tsanganana ankavia mankany amin’ny tsanganana havanana ary tehirizo. Ho hitanao fa azonao ampiana ireo safidy hitsin-dàlana 2 ao amin’ny menio ambony.
7. Ahoana ny fametrahana tsipika diagonaly ao amin’ny sela
Raha vao mamorona lisitry ny entana na kojakoja ianao dia mety mila mamorona tsipika diagonaly ihany koa mba hizarana toetra samihafa ho an’ny andalana sy tsanganana. Matetika ianao no manao izao manaraka izao: Ao amin’ny sela tianao hanaovana diagonaly, tsindrio havanana ary safidio ny Format Cell > tsindrio eo amin’ny tabilao Border, ary tsindrio ny bokotra diagonal.
Ireto ny hetsika momba ny fanazaran-tena excel fototra fa tena ilaina tokoa fa mila mahatakatra sy mianatra mampiasa tsara ianao mba hamonjena ny fotoana, ary koa ny ezaka sy ny fanafainganana ny asanao. Ampitomboy tsy tapaka koa ny fahaizanao excel fanazaran-tena hanatsarana ny fahaizanao informatika birao. 123job dia mirary fahombiazana ho anao.
Previous: Sắp Xếp, Quản Lý Công Việc Như Thế Nào Để Hiệu Quả | Anybook.vn
Next: Chùm thơ tình Biển buồn, tâm trạng cô đơn lúc chiều hoàng hôn | Anybook.vn